Shisheeyaha Oo Qirtay Xasuuqii Duleedka Qoryooley. – Calamada.com
Shisheeyaha Oo Qirtay Xasuuqii Duleedka Qoryooley.
calamada December 21, 2016 3 min read
War Saxaafadeed ka soo baxay taliska isbaheysiga Kufaarta Afrikaanta ee ku sugan Soomaaliya ayaa qirtay in ugu yaraan lix ruux oo dad shacab ah ay ku dileen duleedka degmada Qoryooley ee wilaayada Sh/hoose, Iyagoona sheegay in lagu qaldamay rakaabka la beegsaday.
Falkan xanuunka badan oo ahaa mid lagu dilay ugu yaraan lix ruux oo shacab ah ayaa markii hore ciidamada Kufaarta Afrikaanta waxay isku dayeen in ay qariyaan xilli hadal heynta khabarka iyo falanqeyntiisaÂ ay isla dhexmarayeen qeybaha kala duwan ee warbaahinta.
Balse Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa baahisay muuqaallo naxdin leh oo laga soo qaaday halka uu ka dhacay xasuuqan kuwaas oo muujinayey sida ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay u beegsadeen gaarigii rakaabka ahaa ee ku socdaalyey duleedka degmada Qoryooleey.
Sawirada la baahiyey waxaa ka mid ah meydadka qaar ka mid ah dadka lagu dilay dhacdadaas oo jirkooda uu gubtay iyo gaariga oo gabi ahaanba burburay.
Taliska Kufaarta Afrikaanta wey u suuragali weysay in ay inkiraan cadeymaha muuqda ee ay soo bandhigtay warbaahinta Islaamiga ee muujinayey falka ay ku kaceen ciidankooda, waxayna qirteen xasuuqqa ay halkaas ka geysteen balse waxay isku dayeen in ay cudurdaar u sameeyaan falkaasi foosha xun.
War Saxaafadeedka ka soo baxay Kufaarta Afrikaanta waxaa lagu sheegay in gaariga uu ku soo dhawaaday meel ay soo dhigteen isbaaro oo ay xeryahooda ka waardiyeynayeen, ka dibna gaariga la armay in uu istaago balse uu darawalkii iska dhaga tiray taas oo keentay in la beegsado sida ay warka u dhigeen.
â€œGaari caasi ah oo ku soo dhawaanayey meesha ayaa la amray in uu istaago laakiin darawalkii waday gaariga ayaa iska dhaga tiray amarka la siiyey, wuxuuna si xawaara leh gaariga ugu soo kaxeeyey halkii ay joogeen ciidanka taas oo keentay in la toogtoâ€ ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Kufaarta.
Taliska Kufaarta Afrikaanta ma sheegin nooca uu ahaa gantaalka ay ku dhufteen gaariga balse waxaa la rumeysan in weerarka aanan loo adeegsan qoryaha boobayaasha.
Goobjoogeyaal tagay goobta uu ka dhacay xasuuqan ayaa sheegayey in loo maleynayo in gaariga lagu dhuftay gantaal culus oo keenay in gaariga uu goobta ku burburo dadkii saarnaa ay halkaas ku gubtaan.
Ciidamada Kufaarta Afrikaanta ee duulaanka ku jooga Soomaaliya ayaa dhowrjeer sidan oo kale xasuuq kaga geystay qeybo ka mid ah deegaanada ay ka joogaan wilaayaatka dalka, waxaana badanaa marka ay sidan oo kale u xasuuqaan shacabka ay ku andacoodaan in weerarkooda uu u dhacay si kamaâ€™a ah iyo in lagu qaldamay, Waxayna sidoo kale balan qaadaan baaritaano iyo dababagalo lagu sameeyo falalka ay ku kaceen ciidankooda balse xaqiiqda ayaa mid sidaas ka duwan, waxayna badanaa taasi mar marsiiyo iyo cudurdaar kaga dhigaan dhiigga ay daadiyeen.
Tusaalaha ugu fudud ee arintaas na tusi karana waa xasuuqii bilooyin ka hor ciidamada Kufaarta ay ka geysteen deegaanka Awdiinle ee lagu dilay ugu yaraan 17 ruux oo shacab Muslimiin ah kaas oo Kufaarta Afrikaanta ay qirteen ka dibna balan qaadeen baaritaan iyo dabagal balse aysan jirin cid wax iska weydiisay wixii markaasi ka dambeeyey.
FG- Xuquuqda Warbixinta Waxaa Iska Leh Radio Andalus.
Previous: Sheekh Aadan Sunne Oo Xabsiga Hargeysa Laga Sii Daayay.
Next: Dad Fara Badan Oo Laga Raafay Magaalada Boosaaso.